အတတ်ပညာ China Medical Face Mask စက်ရုံနှင့် တင်သွင်းသူများ |Zhongxing
ကျွန်ုပ်တို့၏ ယက်မထုတ်သည့် မျက်နှာဖုံးကို ထိပ်တန်း ဂျပ်မပါတဲ့ အထည်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်လုပ်သည့် ဘုံအရွယ်အစားများမှာ 175*95mm၊ 145*90mm၊ 125*80mm စသည်ဖြင့်၊ အလွှာ2သို့မဟုတ်3သို့မဟုတ်4ခုအပြင် သုံးဘက်မြင်မျက်နှာဖုံးများနှင့် BFE ဒီဂရီများသည် ပစ္စည်းပေါ်မူတည်၍ 95% ဖြစ်သည်။ဖောက်သည်များ၏ လိုအပ်ချက်အရ မျက်နှာဖုံးကိုလည်း ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်နှာဖုံးများကို ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ အမေရိက၊ အိန္ဒိယ၊ ဗီယက်နမ်စသည်ဖြင့် နိုင်ငံအများအပြားသို့ တင်ပို့ခဲ့ဖူးသည်။
1. Non ယက်လုပ်ထားသော မျက်နှာဖုံးကို ချည်မျှင်မဟုတ်သော ယက်လုပ်ထည်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး အရည်ပျော်ကျသော ယက်မလုပ်သောအထည်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။
2. ဆေးရုံ၊ သို့မဟုတ် စက်မှုနားတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ မျက်နှာကို ဖုန်မှုန့်၊ ရေနှင့် ဘက်တီးရီးယားတို့မှ ကာကွယ်ပေးသည်။
3 .နိုင်ငံတကာစံနှုန်း-CE၊ EN14683၊ISO နှင့်ကိုက်ညီသည်။
4. မြင့်မားသော filtration ထိရောက်မှုနှင့်အတူ နိမ့်သောအသက်ရှုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
5. အဆိပ်မရှိသော၊ ဓာတ်မတည့်သော၊ လှုံ့ဆော်မှုမရှိသော အလွှာပေါင်းစုံဖြင့်။
6. ချိန်ညှိနိုင်သော အသွင်အပြင်ရှိသော အလူမီနီယမ်နှာခေါင်းစွပ်နှင့် ပျော့ပျောင်းသောအတွင်းပိုင်းအမြှုပ်နှာခေါင်းကူရှင်သည် သင့်လျော်သောအံဝင်ခွင်ကျရှိစေရန်နှင့် လုပ်သားသက်တောင့်သက်သာရှိစေရန် ကူညီပေးပါသည်။
7. ထိရောက်ပြီး အားကောင်းသော လျှပ်စစ်ဓာတ်မှန်စစ်ထုတ်သည့်ပစ္စည်းများသည် အစိုင်အခဲအမှုန်အမွှားများကို ထိရောက်စွာ စစ်ထုတ်ကာ ဆီအရည်ဓာတ်ငွေ့ကို တားဆီးပေးသည်။
8. ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကင်းသော၊ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှု၊ သန့်ရှင်းမှု၊
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမျက်နှာဖုံး အထုပ် ၅၀
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမျက်နှာဖုံးများကို ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဓာတ်ခွဲခန်းများ၊ လူနာတင်ကားများ၊ နေအိမ်များ၊ အများသူငှာနေရာများနှင့် အခြားနေရာများတွင် ဝတ်ဆင်ရန်၊ အသုံးပြုသူ၏ပါးစပ်၊ နှာခေါင်းနှင့် တင်းကျပ်သည့်နေရာများတွင် ရောဂါပိုးမွှားများ၊ ခန္ဓာကိုယ်အရည်များ၊ ပျံသန်းနေသောပူဖောင်းများ၊ အမှုန်အမွှားများနှင့် အခြားတိုက်ရိုက်ကူးစက်မှုများကို ကာကွယ်ရန် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမျက်နှာဖုံးများကို အဓိကအားဖြင့်အသုံးပြုပါသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတားအဆီးများ။အဓိကအသုံးပြုနည်းများမှာ-
3လွှာ (100% ပစ္စည်းအသစ်)
ပထမအလွှာ- 28g/m2 ပတ်ချာလည်-ဘွန်း PP
ဒုတိယအလွှာ- 28g/m2 အရည်ပျော်-မှုတ်ထုတ် PP (filter)
တစ်ခါသုံး ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကာအကွယ် မျက်နှာဖုံးများ
28Gsm သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသည်။
50Pcs/box၊ 40 Boxes/Carton သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသည်။
3 Layers သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ။
TT၊ LC၊ VISA
ဆေး၊ ဆေးရုံ၊ နေ့စဥ် အကာအကွယ်
နောက်တစ်ခု: Medical Surgical Fack Mask
Fda ဖြင့် တခါသုံး Mask ၃ လွှာ
3 Ply တစ်ခါသုံးမျက်နှာဖုံး
Black Face Mask တခါသုံးပါ။
Face Mask တခါသုံးဆေး
Ffp1 တစ်ခါသုံး Mask
တစ်ခါသုံး Half Mask အသက်ရှူကိရိယာ, Ffp1 တစ်ခါသုံး Mask,3Ply တစ်ခါသုံးမျက်နှာဖုံး, မျက်နှာကဲ့သို့ Mask, Mask အလုပ်, Fda ဖြင့် တခါသုံး Mask ၃ လွှာ,